Amalunga egatsha i-SAMSA (kwesokunxele, abamile) Mnu Lwazi Mjadu, Nkz Shi-Hsia Hwa, Mnu Sihle Nyawose, Mnu Bahle Tshoba, Nkz Jessica Hunter, Dkt Leila Mansoor, Nksz Isabel Khan, no Mnu Vikkar Singh; (abahlezi) Nkz Mathapelo Mpotoane no Mnu Kumeren Govender.
Igatsha elisha lenhlanganio yabafundi bezokwelapha eNingizimu Afrika ebizwa ngokuthi i-South African Medical Students Association (SAMSA) selivuliwe esikoleni sezokwelapha sase UKZN iNelson Mandela School of Medicine (NRMSM). ISAMSA, inhlangano eholwa ngabafundi bezokwelapha ephinde ibe ngeyabafundi bezokwelapha kanye nomphakathi, yasungulelwa ukumela ezokwelapha, ukufundisa, ukuxhumana kanye nezinhlelo zokwelekelela. Ihlose ukunikeza isisekelo sokuthi abafundi bezokwelapha bakwazi ukuletha ushintsho olufanele kumazinga ezwelonke, e-Afrika kanye nasemhlabeni jikelele.
Igatsha elisha le-SAMSA e-UKZN ligubhe umcimbi walo wokuqala ngesonto lapho kugujwa khona usuku lokuzalwa kukaMandela i-Mandela Week, lokhu kudonse kwaze kwaphela izinsuku ezine kuxoxiswana, usuku nosuku kwenzeka izinhlelo ezikhethekile.
Umcimbi uqale e-ICC eThekwini lapho amalunga e-SAMSA ebebambisene nenhlangano elwisana nendlala ebizwa ngokuthi i-Stop Hunger Now Foundation kupakishwa ukudla ukuze kunikezwe abaswele, lokhu kwalandelwa wusuku lokuqwashisa nge-HIV kanye ne-TB esikoleni sezokwelapha i-Medical School kuhloswe ekwakheni ukucwaninga okudlondlobele kwabezempilo bakusasa.
Abamele izinhlangano ezimbili ezihlonishwayo kwezokucwaninga – i-Centre for the AIDS Programme of Research in South Africa (CAPRISA) ne KwaZulu-Natal Research Institute for Tuberculosis and HIV (K-RITH) - bazihlanganise nabafundi bezokwelapha.
Usuku lwesithathu lwalubhekiswe ekunikeleni ngegazi kuhlangenwe nabe-South African National Blood Service (SANBS), usuku lokugcina lwagujwa ngezinhlelo ezijabulisayo njengokufutha izinwele ngemibala ukuze kutholwe imali yesikhwama sekhensa kubanjisenwe nenhlangano i-UKZN-Golden Key.
Umengameli nomsunguli we-SAMSA-UKZN, ongumfundi wezokwelapha owenza unyaka wesine, uMnu Kumeren Nadaraj Govender, uthe: ‘umcimbi waloluhlobo oholwa ngabafundi akusiwo umsebenzi olula kodwa ngibonga iqembu lami ngokunikela ngesikhathi namandla abo ukuqinisekisa ukuthi lenhlangano iba yimpumelelo. Kubalulekile ukuthi abafundi bazibandakanye nezinhlelo zemiphakathi besabancane ukuze babe ngamalunga emiphakathi enza umehluko.’
UMnu Lwazi Mjadu wekomidi le-SAMSA uthe: ‘ uNelson Mandela ngeke azigqaje ngokuthi ikhampasi yethu iqajwe ngokuhlonipha yena kodwa futhi nangokuthi abafundi bazimisele ukuba ngabenza ushintsho oluhle emphakathini.’